Volamena ao Betsiaka:AM-POLONY KILAO ISAKA NY HERINANDRO -
AccueilSongandinaVolamena ao Betsiaka:AM-POLONY KILAO ISAKA NY HERINANDRO
18/11/2016 admintriatra Songandina 0
Mahavariana ny tsy niresahan’ireo hainoamanjery mpomba ny fanonganam-panjakana ny fitrandrahana volamena ao Betsiaka, tanàna kely eo anelanelan’Ambilobe sy Vohemar. Am-polony kilao isaka ny herinandro ny volamena mivoaka ao amin’io tanàna io araka ny vaovao marim-pototra azo, izany hoe, amina miliara isaka ny herinandro. Ny raharaha Soamahamanina hatrany mantsy no voaresaka sy nodradradradraina tamin’ny hainoamanjery kanefa misy fitrandrahana volamena goavana am-polony kilao isaka ny herinandro.
Fantatra mantsy izao fa misy tompona gazety sy hainoamanjery mpomba ny mpanohitra ary tena mpanenjika ny fitondram-panjakana miray petsapetsa amin’ireo manam-pahefana manao izany fitrandrahana volamena ao Betsiaka izany. Nentina nanakonana sy nandrebirebena ny saim-bahoaka mba tsy hifantoka amin’ny fitrandrahana volamena ao amin’io toerana io fotsiny ihany ny raharaha Soamahamanina rehefa dinihana. Mba nandrasana ihany ny hivoahan’ity fitrandrahana volamena ao Betsiaka ity tamin’ny hainoamanjerin’ny mpanohitra saingy tsy nisy na dia nilaza ny hamoaka “grand dossier” manodidina ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany mihitsy aza ny sasany.
Mazava araka izany ny zava-misy eto amin’ity firenena ity. Henjehana sy ampangaina ho manao izao rehetra izao ny Filoha sy ny vady aman-janany mba hanakonana ny atao ary ny tena mahavariana dia izao fiaraha-miasan’ny manampahefana sasantsasany amin’ny hainoamanjery mpanenjika fanjakana. Izay no nilaza teto nandritra ny telo na efa-bolana mahery izay fa tsy ny tombontsoam-bahoaka izany velively no notakiana tao ambadik’ireny hetsika maro samihafa ireny fa tombontsoan’olon-tokana dia izy efa manomboka mivoaka sy mipoitra tsikelikely izao.
Banky Foiben’i Manakara : Taiza ny Frantsay sy ny Amerikana?
Miditra lalina amin’ny fiainana anatin’ny firenena ry zareo Amerikana sy Frantsay taorian’ny raharaha Claudine ary toa miampanga ny fitondrana mihitsy aza. Marihana ety am-boalohany fa mpandraharaha tsotra i Claudine ary miara-manaiky isika fa sambany hatramin’ny ...Tohiny